Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Massimiliano Allegri Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kacha mara aha na aha njirimara “Anchovy".
Anyị Massimiliano Allegri Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị nkuzi kachasị mma na Serie A. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Massimiliano Allegri's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Massimiliano Allegri Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, Massimiliano Allegri mụrụ na 11th nke August 1967 n'obodo Livorno dị n'Ịtali. Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụ abụọ mụrụ nne ya, Carla Allegri na nna ya Augusto Allegri.
Nne Allegri bụ Carla. Ebe E Si Nweta: Twitter.
A zụlitere Allegri na-eto eto na mpaghara Coteto, na Livorno ebe o toro na nwanne ya nwanyị bụ obere Michela.
N'ịbụ onye tolitere n'ógbè ahụ, Allegri bụ nwa na-ahụ egwuregwu na-ahụ n'anya nke na-etinye mmasị n'egwuregwu n'etiti ịgba ịnyịnya na football. Otú ọ dị, ọ dọtara mmasị ya n'ịgba ịnyịnya, egwuregwu nke ọ hụrụ n'anya mgbe nna nna ya kpọgara ya n'okporo ụzọ mgbe ọ dị nanị 5.
Claudio Marchiso Child Story Story nke na-emeghi ihe omuma
Mmasị Allegri na agbụrụ ịnyịnya malitere mgbe ọ bụ agadi 5.
Nwatakịrị ahụ nọgidere na-enwe obi ụtọ banyere agbụrụ ịnyịnya na ihe niile ọ gụnyere tinyere itinye nzo nke o meriri mgbe ụfọdụ ma ọ bụ furu efu. N'oge na-adịghị anya, Allegri ghọrọ onye nwe ịnyịnya iji mee ka mmasị ya maka egwuregwu ahụ zuru ezu. Nke a bụ ndụ maka nwata ahụ nwere obi ụtọ.
Massimiliano Allegri Nwatakiri Akuko - Agụmakwụkwọ na Ọrụ Buildup:
Ọchịchọ Allegri maka ịnya ịnyịnya debara aha ya nke ọma mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na mmanye siri ike na-etinye ya n'okporo ụzọ nke ịmalite ọrụ na football. Onye dị afọ iri na ụma enweghị mmasị ịga akwụkwọ na ịmanye ndị mụrụ ya ịga klas mgbe niile mere ka ịkpọasị ya sie ike.
"Massi, ị pụghị ịgba akwụkwọ! Ikwesiri iwere ule ndia! Ịkwesịrị ịnọdụ ala ma mụta banyere Napoleon! ". '' Allegri na-echeta mbọ nne na nna ya meriri ịkpọasị ya maka agụmakwụkwọ.
Ọ bụ ezie na Allegri tinyere akwụkwọ a manyere ya amanye na ọ chọghị ịbụ ezigbo nwa akwụkwọ mana ọ ga-aga nke ọma na mbọ ndị ọzọ ma bụrụkwa onye nchịkwa nke ụlọ akwụkwọ ahụ.
“Echetara m otu ụbọchị m nọrọ na klaasị, onye nkuzi were m iwe maka ihe ọ bụla, enwetara m nghọta a. Echetara m ịgwa onwe m, sị: 'Ebughị m n'uche ịbụ ezigbo nwa akwụkwọ. Mana enwere m ike ịbụ ezigbo onye isi '”. O chere.
N'otu uzo ahu, egwuregwu ndi ogwuri egwu ndi ogwuri egwu di ka nwata maka ulo akwukwo Livorno nke obodo ya, kwadoro ike ya na ndi mmadu na ndi ozo maka ndu.
“Ọbụna mgbe m nọ n’ámá egwuregwu bọl mgbe m dị afọ iri na ụma, achọrọ m ịbụ onye nkụzi. Enwere m mkparịta ụka mkparịta ụka na ndị nkuzi m, mana ọ bụghị maka igwu egwu oge ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Ọ bụ n'ihi na, ọbụlagodi, achọrọ m ịgba ọsọ otu ụzọ m ". Ọ chetara ndị Players Tribune.
Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Allegri (nke abụọ site n'aka nri na ọnọdụ crouching) na-egwuri egwu maka obodo Livorno nke obodo ya na ndị otu egwuregwu ndị ọzọ.
Massimiliano Allegri Nwatakiri Ihe omuma - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ngwurugwu na-enye ọzụzụ na-apụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ bụ agadi 16 iji lekwasị anya na football. O jiri afọ 8 na-egwu maka ìgwè nke Italian nke mbụ gụnyere: Cuoio Pelli Juventus, Livorno, Pisa na Pavia tupu ha abanye na Pescara na 1991.
Mgbe Allegri nọ na Pescara, Allegri guzobere onwe ya dị ka onye na-etiti obodo wee mezie mmekọrịta chiri anya ya na onye nkuzi ya tụgharịrị onye nkụzi, Giovanni Galeone. Ọ dị mma ịmara na Galeone bụ ezigbo onye nchịkwa nke njikwa njikwa ya mere "ịchọ njikwa" na Allegri dị isi ike ruo ọtụtụ afọ.
"Mụ na ya nọrọ afọ asaa, Galeone nwere ezigbo echiche ma nwee echiche ọhụụ" kwetara Allegri.
Pescara rụrụ ọrụ dị mkpa na mmepe Allegri dị ka onye ọkpụkpọ.
Massimiliano Allegri Biography - Tozọ Iji Mara Aha:
Mgbe 19 gachara egwu egwuregwu, Allegri nakweere ezumike nká na Aglianese bụ ụlọ ikpeazụ ọ na-egwuri egwu. O mechara malite ọrụ ya na ndị òtù Serie C2 nke Aglianese ma nwee oge dị egwu na ha.
Ọrụ ndị nkuzi na-aga n'ihu na-ahụ Allegri na-edekọ ọrụ ọrụ nlekọta na-enweghị isi na Serie C1 team Grosseto. Otú ọ dị, ọ gbapụtara onwe ya na Sassuolo, Cagliari na Milan.
Massimiliano Allegri Bio - Rise To Fame Akụkọ nke:
2014 bụ afọ nke Allegri ghọrọ onye isi nchịkwa ọhụrụ nke Juventus. Ọ bụ ezie na nhọpụta Allegri anabataghị ọtụtụ ndị lere ya anya dị ka onye na-erughị eru iweghara ya Antonio Conte, o gosipụtarala na ọ bụ onye nchịkwa nke mbụ site na-eduga Juventus ka ọ bụrụ isi anọ Coppa Italia dị iche iche, abụọ ndị na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu n'etiti ndị ọzọ rụzuru.
Rafa Benitez Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Massimiliano Allegri Mmekọrịta Ndụ:
Massimiliano Allegri ebielala otu ugboro. Anyị na-ewetara gị ihe ọmụma gbasara akụkọ nwoke na nwanyị na-akpa, mmekọrịta alụmdi na nwunye na mmekọrịta ndị ọzọ.
Nke mbụ bụ mmekọrịta ya na ịma mma a na-akpọ Erika na 1992. A na-edebe ịhụnanya ahụ ruo n'ókè nke ịbanye na ya ma kwụọ ụgwọ ịlụ. Otú ọ dị, Allegri ji mmekọrịta chiri anya ma kwusi ememe agbamakwụkwọ ha mere atụmatụ 24 ruo ihe omume ahụ. Erika bụ nwa akwụkwọ kọleji n'oge ahụ kwadoro mkpebi Allegri ma ha abụọ jere ụzọ dị iche.
Alex Ferguson Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Mmekọrịta ndị na-esote n'oge ahụ hụrụ Allegri lụrụ Gloria Patrizi na 1994. A gọziri alụmdi na nwunye ha na nwa nwanyị Valentina Allegri (a mụrụ 1995). Otú ọ dị, njikọ ahụ adịteghị aka ka ha kewapụrụ mgbe afọ 4 lụsịrị.
Allegri na Gloria lụrụ naanị afọ 4 tupu ha agawa ụzọ dị iche.
Moga Allegri malitere ịlụ Claudia. Ihe niile dị mma maka duo ahụ nke kewara na mberede mgbe Claudia dị ime nwa mbụ Allegri bụ Giorgio. A mụrụ nwa nwoke na ọnwa 2012 mgbe nne na nna ya kpọchara ya.
Allegri dịka nke 2019 ugbu a na-eme ihe nkiri Ambra Angiolini. Ha abụọ na-ebikọ ọnụ na akụkọ na-egosi na n'oge na-adịghị anya ha nwere ike wepụ agbamakwụkwọ nzuzo n'oge na-adịghị anya.
Allegri dị ugbu a na-eme ihe nkiri Ambra Angiolini.
Ndụ Massimiliano Allegri Ezinụlọ:
A mụrụ Allegri na ezinụlọ 4. Anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke banyere ndị òtù ezinụlọ ya.
Banyere Nna Allegri:
Nna Allegri bụ Augusto Allegri. Augusto bụ ezigbo nna nke lekọtara nwunye ya na ụmụ ya site na ịrụ ọrụ dị ala n'ọdụ ụgbọ mmiri tinyere igbe aka ya. Obi abụọ adịghị ya nso nso Allegri bụ onye na-ekwu okwu ọma banyere ya n'oge ọ bụla.
Banyere mama Allegri:
Nne Massimiliano Allegri bụ Carla Allegri. Ọ na-arụ ọrụ dị ka nọọsụ tupu ya amalite ọrụ na ụlọ ọrụ nhicha iji nweta ego karịa maka nlekọta ezinụlọ. O wutere ya na May 2018 ka ọ dị afọ 74.
Nne Allegri Carla nwụrụ na 2018 mgbe ọ dị afọ 74.
Banyere nwanne Allegri: Allegri enweghị otu nwanna nwoke mana ọ na-enwe obi ụtọ na ya na nwanne ya nwanyị hụrụ n'anya nke aha ya bụ Michela. N'adịghị ka nwanne ya nwoke nke okenye, Michela nwere àgwà ndị na-amasị ya, gụnyere ịdị jụụ ma na-apụ apụ.
Massimiliano Allegri Ndụ Nke Onwe:
Ọtụtụ n'ime afọ ndị a elele anya na Allegri ka ọ bụrụ onye oyi na onye na-enweghị atụ. Obere na ha maara na o kpebisiri ike na ọ ga-ewepụ ya ka ọ na-enyere ya aka ịbụ onye njikwa ka mma.
Mkpebi ya ibi ndụ nke onwe ya nwere ike ọ gaghị enwe njikọ na oke nkatọ ọ maara ya. Na-ekwu okwu na magazin GQ na 2016 Allegri kwetara na nkatọ a ma ama na-eme ka usoro a dị.
Fikayo Tomori Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Ha kwuru, sị: '' Allegri bụ onye nzuzu. 'Ọ na-egwuri egwu na cha cha, ọ na-agba ịnyịnya, na-ahapụ nwunye ọhụrụ n'ebe ịchụàjà, ọ na-eme isi n'isi.' ”
Ọtụtụ ndị na-ahụta Allegri
A kpọrọ 'anchovy' nke aha ya dị obere, Allegri nwere obi ike na onye a maara maka ikike ya ịchọpụta na mgbanwe na-edozi nsogbu site na echiche dị iche iche.
Massimiliano Allegri Eziokwu Eziokwu:
Allegri na ndị ọzọ na-agba ụkwụ isii Italiantali nọ na 2001, nyere iwuchibido ịgba bọọlụ otu afọ maka ebubo nke idozi egwuregwu. Otú ọ dị, ọ na-ekwusi ike na ya etinyeghị aka na ndozi ahụ.
N'ikwu okwu n'oge nkenke nchịkọta akụkọ na 5th nke June 2012, Allegri (ugbu a 51 afọ) kwuru na ya na-ezube ịla ezumike nká na 55 afọ, na-ekwusi ike na Job nwere nrụgide na nchekasị dị elu.
N'afọ 2008, Allegri meriri asọmpi si Serie A na-emeri nchịkwa José Mourinho iji merie Panchina d'Oro (Golden bench), onyinye a na-enye onye njikwa bọọlụ Serie A kacha mma dịka ntuli aka ndị isi ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Massimiliano Allegri Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Julian Nagelsmann Akụkọ nwata
Freddie Ljungberg Childhood Akụkọ Untold Biography Eziokwu
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 15, 2021
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 13, 2021